Ogaden News Agency (ONA) – Shir xuquuqul insaanka ah oo ka dhacay Minneapolis.
Shir xuquuqul insaanka ah oo ka dhacay Minneapolis.
Posted by wariye5	/ April 10, 2011
Waxaa gobolka Minnesota ee caraiga maraykanka ka dhacay shir balaadhan oo ku saabsanaa siyaasada iyo xuquuqul insaanka khaasatan gobolada geeska Africa. Shirkan ayaa waxaa si wada jir ah isula soo qaban qaabiyay Jaaliyada Ogadenya ee gobolka Minnesota, jaaliyada Oromiya iyo haayado caalami ah oo xuquuqul insaanka ka shaqeeya.
Dhanka kale shirkan waxaa lagu casumay oo ka soo qayb galay siyaasiyiin martaba sare ku leh gobolkan Minnesota iyo waliba wadankan maraykanka sida siyaasiga rugadaaga ah isla marahaantaana ah duqa magaalada Minneapolis mudane Mayar R.T.Rybak. mudane Rybak ayaa isgu si aad ah ugu nuux nuuxsaday xadgudubyada binii aadminimo ee ka dhacaya guud ahaan Ethiopia gaar ahaana gobolada Ogadenya iyo Oromiya. Waxaa uu mudane Rybak intaasi ku daray in la soo gaadhay wakhtigii lala xisaabtami lahaa kaligiitaliye Malez Zanaawi.
Kasokow dadkii faraha badnaa ee shirkaas ka hadlay waxaa jaaliyada Ogadenya matalaysay oo u hadashay Hibaaq Cabdullahi Ducaale oo ayadu ah gabadh dayar oo u dhalatay Ogadenya si xeel dheerna u taqaana xaalada Ogadenya iyo dhibaatada gumaysiga Ethiopia. Hibaaq ayaa ayadu khudbadeedii saamayn wayn ku samaysay ka soo qaybgalyaashi sjirka ayadoo halkaasi ku soo bandhitay xago aan horay loo haynin oo ku saabsan xuquuqul insaanka Ogadenya.
Dhamaanba hayadihii iyo jaaliyadihii shirkan isla soo qaban qaabiyay ayaa hoosta iskala xariiqay inay howshan sii wadayaan shirar isdaba jog ahna ay qaban doonaan mustaqbalka dhow.
Hayada xuquuqul insaanka ee ee loo yaqaano “The Advocates for Human Rights” waxay ololebalaadhan ugu jiraan sidii dhaqalaha Ethiopia la siiyo uu maraykanku uga jari lahaa. Waxaayna ka soo qayb gala yaashii shirka ka codsaden inay u saxii xaan warqado loo dirayay baarlamaanka maraykanka si loogu muujiyo dareenka muwaadiniinta maraykanku ee ku aadan Ehtiopia iyo xumida xuquuqul insaanka.
Dhanka kale waxaa shirka wacdaro ka muujiyay ururka dhalinta iyo ardayda Ogadenya oo ku soo bandhigay hido iyo dhaqan aad u sareeya.
Shirka oo ay si aad u bilicsan ay uga soo qayb galeen jaliyadihii iyo ururadii qaban qaabinayay ayaa jawi aad u qurxoon ku dhamaday.
Mohamed Darba wayne,
waa wax wanaagsan, tallabo horay loo qaaday weeye, gumaysiga jug cusub ayay ku tahay, si joogto ahna waa loogu bahdilaa fagaarayaasha sidan oo kale xuquuqda dadka lagaga hadlayo, waa dad cun dhiigya can males, mana garan karo xuquuq dad waxa ay tahay, waraabe adhi miyaa la raacsadaa, jaaliyadda reer Ogaadeeniya way dadaadlayaan, guulaysta guusha idinka ayaa leh insha allaah, dhalinta hibaaq oo kale ah waa kuwa gumaysiga ku shiday dabka uu ka gami` la`yahay
Waxaan bogaadinayaa dadaalada aan kala go’a lahayn ee hadh iyo habeen wadaan dhamaan ururada u dooda xuquuqda aadmaha ee Ogadenia ka soo jeeda. Waxaana mar kale, aad ugu hambalyeynayaa Jabhadda ONLF_JWXO, oo noqotay lafdhabarta iyo aayaha shacabka Ogadenia, gaadhayna meel aan ka soo noqod lahayn xag walba. Waana wax lagu faano heerka ay noo taagan tahay JWXO_ONLF oo qadiyadanada gaadhsiisay Majaalista Aduunka oo idil.
waa wax lagu farxo barnamujyadan dhalintu u istaagtay waxana leeyahay dhalinyaroo dhulkeeni waa dhacan yahaye siiwada dagaalka cadawgana wadnaha gooya